UBARBARIKA: UQHAWE OBENGABULALA IMPI YASEMAHABHARATA NGOMZUZU - PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-INGOKOMOYA
UBarbarika: UQhawe Ongaqeda Impi YaseMahabharata Ngomzuzu
Ikhaya Ingokomoya le-Yoga Imfihlakalo yokholo Ukholo Mysticism oi-Sanchita Ngu USanchita Chowdhury | Kubuyekezwe: NgoLwesine, ngoJulayi 10, 2014, 17:43 [IST]
IMahabharata ithathwa njengendaba ende kunazo zonke emhlabeni. Inabalingiswa abaningi kuyo. Ngokwemvelo, akunakwenzeka ngathi ukuthi sazi futhi sikhumbule zonke izinhlamvu zale ngqophamlando. Abalingiswa babonakala bedideka ngokweqile kumuntu wangaphandle noma nathi esijwayelene namagama ambalwa aziwayo avela ku-epic. Kepha njengazo zonke izindaba ezimnandi, iMahabharata nayo inamaqhawe amaningi angaconsi phansi adlala indima ebalulekile endabeni.
Enye yezindaba ezinjengaleyo yeqhawe elalingayiqeda impi enkulu yaseKurukshetra ngomzuzu. Ungamangali. Wayaziwa ngegama likaBarbarika noma ngokudume kakhulu uKhatu Shyam Ji. UBarbarika wayengumzukulu kaBheema, indodana kaGhatotkach noMaurvi. UBarbarika wayeyiqhawe elikhulu kusukela ebuntwaneni bakhe. Ngaphambi kwempi yaseMahabharata, u-Lord Krishna wabuza wonke amaqhawe ukuthi bazothatha izinsuku ezingaki ukuqeda impi. Zonke ziphendule ngokwesilinganiso sezinsuku ezingama-20-15. Lapho ebuzwa, uBarbarika waphendula ngokuthi uzoqeda impi ngomzuzu nje.
INDIMA YENKOSI U-HANUMAN E-MAHABHARATA
Emangazwe yimpendulo yakhe, u-Lord Krishna ubuze uBarbarika ukuthi uzokwenza kanjani lokho. Ngemuva kwalokho uBarbarika waveza imfihlo yakhe yemicibisholo emithathu ayinikwa njengesibusiso yiNkosi Shiva. Ngale micibisholo uBarbarika angaqeda impi yaseMahabharata ngomzuzu nje.
Ngabe ufuna ukwazi lonke udaba? Bese ufunda.
Ngaphandle kokuba iqhawe elikhulu, uBarbarika wayengumuntu ozinikele kakhulu kuLord Shiva. Wayenze ukuzisola okukhulu ukuze ajabulise iNkosi Shiva. Njengesibusiso wathola imicibisholo emithathu eyayinamandla omlingo. Umcibisholo wokuqala uzobeka uphawu kuzo zonke izitha zikaBarbarika afuna ukuziqeda. Ngokusebenzisa umcibisholo wesithathu, uzobhubhisa zonke izinto ezimakiwe bese ubuyela emuva emgodleni wakhe. Umcibisholo wesibili uzomaka zonke lezo zinto nabantu afuna ukubasindisa. Ngemuva kwalokho uma esebenzisa umcibisholo wesithathu, uzobhubhisa zonke izinto ezingamakiwe. Ngamanye amagama, ngomcibisholo owodwa ubengamaka zonke lezo zinto ezidinga ukubhujiswa kanti ngolwesithathu angavele azibulale zonke ngokudubula okukodwa. Ngakho-ke, iBarbarika yaziwa ngokuthi 'iTeen Baandhari' noma leyo enemicibisholo emithathu.
Lapho ezwa ngesibusiso sakhe, uKrishna wanquma ukumvivinya. Ngakho-ke, wagcona uBarbarika maqondana nokulwa impi ngemicibisholo emithathu kuphela futhi wamcela ukuthi akhombise amandla akhe. UBarbarika waya ehlathini noKrishna futhi wahlose ukuqoqa amaqabunga esihlahla. Ngenkathi uBarbarika evala amehlo, uKrishna wathatha iqabunga esihlahleni walifihla ngaphansi konyawo lwakhe. Ngenkathi uBarbarika ethumela umcibisholo wakhe wokuqala ukumaka amaqabunga, umcibisholo weza uphuthuma ezinyaweni zikaKrishna ukumaka iqabunga lokugcina elalifihlwe ngaphansi kwalo. UKrishna wamangala ngakho futhi lapho ephakamisa izinyawo, iqabunga lalimakwa. Wabe esethumela umcibisholo wesithathu futhi wonke amaqabunga aqoqwa futhi ahlanganiswa ndawonye.
Izimo Zesibongo sikaBarbarika
Isisa sikaBarbarika sasinezimo ezimbili. Wayengayisebenzisi imicibisholo nganoma iyiphi impindiselo yomuntu siqu nokuthi wayezoyisebenzisa njalo ukulwa impi evela ohlangothini olubuthakathaka enkundleni yempi.
Ngemuva kokubona amandla kaBarbarika, uKrishna wambuza ukuthi uzolwa naluphi uhlangothi empini yaseKurukshetra. UBarbarika uthe nakanjani uzolwa namaPandavas kwazise ayengohlangothi olubuthaka uma kuqhathaniswa neKauravas. Ngemuva kwalokho uKrishna wathi uma uBarbarika esekela iPandavas, babezoba uhlangothi oluqine ngokuzenzekelayo. Ngakho-ke, uBarbarika wasala enkingeni. Kuzofanele aqhubeke nokushintsha izinhlangothi ukuze afeze izimo zesibusiso sakhe. Ngakho-ke, kwaba sobala kuBarbarika ukuthi kuzofanele anikele ngempilo yakhe ngenxa yenhlalakahle yesintu ngoba noma iluphi uhlangothi aye kulo luzovele luqine futhi ngeke akwazi ukusebenzisa amandla akhe.
Ngakho-ke, empini yangempela, uzoqhubeka nokushayisana phakathi kwezinhlangothi zombili, ngaleyo ndlela abhubhise lonke ibutho lazo zombili izinhlangothi futhi ekugcineni kusele yena kuphela. Ngemuva kwalokho, akekho noyedwa ohlangothini onqobayo njengoba kuzobe kunguye yedwa osindile. Ngakho-ke, uKrishna ukugwema ukubamba iqhaza kwakhe empini ngokufuna ikhanda lakhe ezinhlanganweni ezisizayo.
UBarbarika uyavumelana nesifiso sikaKrishna kanye nezinwele zekhanda lakhe. Ngaphambi kokuba afe ubuza isikhulu esivela kuKrishna ukuthi ufuna ukubuka impi yaseMahabharata. Ngakho-ke, iNkosi uKrishna imnika isifiso futhi ikhanda lakhe liyiswa esiqongweni sentaba nguBheema futhi ukusuka lapho uBarbarika wabuka yonke impi yaseMahabharata.
UKhatu Shyam Ji
E-Rajasthan, uBarbarika ukhonzwa njengoKhatu Shyam Ji. Wathola igama likaLord Krishna (Shyam) ngenxa yokuzidela kwakhe nokukholelwa kwakhe eNkosini. INkosi Krishna imemezele ukuthi ngokumemezela igama likaBarbarika ngenhliziyo yangempela, abazinikelayo bazonikezwa izifiso zabo.
ungasinciphisa kanjani isisu kungapheli isonto
ungazihlanza kanjani izinto ze-pooja zesiliva ekhaya
ungayikhetha kanjani i-compact powder yesikhumba samaNdiya
indlela yokwenza irayisi ye-schezwan ekhaya
umugqa owodwa obomvana obomvu nomugqa owodwa okhanyayo opinki esivivinyweni sokukhulelwa